Madaxweyne Xasan oo furay todobaadka dhir beerista – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Mareeg.com: Madaxweynaha Soomaaliya, Xasan Sheekh Maxamuud ayaa maanta ka qeyb galay isu-soo-bax lagu daah furayay toddobaadka dhir beerista qaranka oo lagu qabtey magaalada Muqdisho.
Munaasabaddan ayaa loogu diyaar-garoobayo maalinta dhirta oo ku beegan 17-ka April, ayaa Madaxweynaha waxaa uu taallada Daljirka Daahsoon ku beeray geed dhireed.
Waxaa qabanqaabada munaasabadda loo xil-saaray wasiir kuxigeenka Wasaaradda Xanaanada Xoolaha, Dhirta iyo Daaqa ee Xukuumadda Soomaaliya.
Guddoomiyaha Guddiga heerka Qaran ee loo xilsaaray qaban qaabada Munaasabadahaas, Cabdinaasir Gaarane Maxamed ayaa waxaa uu ka hadlay muhiimada dhirtu u leeedahay bulshada Soomaaliyeed, isagoo ku baaqay in bulshada ay u istaagto beerista dhirta.
Wasiirka Wasaaradda Beeraha Xukuumadda Soomaaliya, Axmed Xasan Gaboobe Ugaas Bile ayaa waxaa uu wax lagu farxo ku tilmaamay in la gaaray waqti dowladda iyo shacabka Soomaaliyeed ay isla gartaan Muhiimada dhirtu leedahay.
Wafdi ka socda dowlada oo gaaray Cadaado (Sawirro)